Ihe 8 Apple tinyegogo na 2016 MacBook Pro | Esi m mac
José Alfocea | | MacBook Pro
Taa dị ka otu izu gara aga na Apple gosipụtara ọhụụ ọhụrụ nke MacBook Pro, laptọọpụ rụzigharị kpamkpam nke na-enye ọkwa nke mmelite dịka anyị ahụbeghị kemgbe ọtụtụ afọ. A slimmer na Mkpa ọkụ imewe, a ọhụrụ ewepụghị keyboard, iwebata Aka Ogwe na Touch ID….
N'agbanyeghị ihe a niile, n'ezie enwere ụfọdụ ndị ọrụ maka mmezigharị ahụ abụghị ihe ọhụụ dị ka ekwuru. Taa, anyị ga-ahụ ruo 2016 radikal agbanwe MacBook Pro agbanweela na XNUMX ume ya. Ọ dị mma, karịa mgbanwe, ihe efu, ụfọdụ n'ime ha ị gaghị achọ nke ukwuu, ọkachasị n'ihi na ha chọrọ ịzụ ahịa na ịkọcha akpa gị karịa.
1 Ndị ị gaghị ahụ ọzọ na 2016 ọhụrụ MacBook Pro
1.1 Ka ọ dị mma na akara ngosi
1.3 Nchaji eriri ndọtị
1.4 Mmalite mkpọtụ
1.5 Njikọ HDMI
1.6 Njikọ USB
1.7 Oghere SD kaadị
1.8 Plastic mgbabere uzo
Ndị ị gaghị ahụ ọzọ na 2016 ọhụrụ MacBook Pro
O doro anya na MacBook Pro ọhụrụ amatala atụmatụ nke 12 ″ MacBook webatara na oge opupu ihe ubi nke 2015, mana enweghị ike ịgọnahụ ya na ọ webatara teknụzụ dị elu n'ezie n'ime akwụkwọ ndetu dịka Touch Bar ma ọ bụ ntinye ya na ID ID . Dị ka 12 ″ MacBook, 2016 MacBook Pro agbasokwara ụzọ nke "wepụ ihe", nke anyị ga-ele anya na-esote.
Ka ọ dị mma na akara ngosi
Ọ bụ ezie na nke a abụghị arụmọrụ, na ekwesịghị ịbụ ihe mkpebi mgbe ịzụrụ ma ọ bụ ịzụtaghị MacBook Pro ọhụụ, ọ na-anọchi anya ntụgharị, ebe ọ bụ ihe ọdịnala dị na Apple. Nke mbụ ọ bụ na 12 ″ MacBook, ugbu a na MacBook Pro. Anyị amaworị onye ga-esote, nri? Ọ bụrụ na ọ ga-adị ndụ. Ọ bụrụ na enwere ihe kpatara ya, karia mgbanwe ịchọ mma dị mfe, nke na-eme ka ọdịda nke akara ngosi na-enwu enyo, ọ ga-abụ ọchịchọ iji nweta slimmer ngwaọrụ.
Apụl agaghịzi enwu gbaa
Omuma ọzọ nke na-apụ n'anya na, n'echiche m, nke na-ewute m nke ukwuu. Echere m na anyị niile hụrụ MagSafe n'anya; O zuru ezu iji mee ka ọ bịaruo ya nso ma tinye ya! Jikọọ! Ma nke kachasị mma, dịka ọ na-eme ka ọ magnetized ma ghara ịtinye ya, ọ bụrụ na ị gafere eriri, ọ ga-ewepu MacBook, kọmputa ahụ agaghị agagharị.
Ugbu a, anyị na-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri 2 ma ọ bụ 4 (dabere na ihe nlereanya ahụ) Thunderbolt 3 na njikọ USB-C. Ee! Ha bara uru karị, kwe ka nnyefe data na ntinye n'otu oge, wdg, mana ha tufuru akụkụ nchekwa ahụ nke masịrị anyị nke ukwuu.
Njikọ MagSafe na-agbada n'akụkọ ihe mere eme
Nchaji eriri ndọtị
Ugbu a, ọ bụ naanị eriri USB-C nke nwere mita abụọ na-agbakwunye. Enweghị nke "eriri mgbatị" ahụ batara na igbe nke MacBook Pros gara aga (na ụdị ndị ọzọ) yana nke bara uru mgbe ị chọrọ iji akụrụngwa gị dịka o kwere mee site na oghere. Ugbu a, ị ga-eru nso na mgbidi ahụ.
MacBook Pro ọhụrụ USB-C USB nwere mgbatị mita 2
Mụ na anyị kemgbe 1980, a gbanwere ụda mmalite mmalite Mac na 2016 MacBook Pro site na ịgbachi nkịtị. Ọ dabara nke ọma onye ọrụ ibe anyị bụ Javier Porcar kọwara anyị esi megharịa ya.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-ejikọkarị MacBook na TV ma ọ bụ nyochaa eriri USB HDMI, kwuo ya. Ogwe HDMI apụwo na 2016 MacBook Pro nke pụtara na ha ga-eji ọdụ ụgbọ mmiri Thunderbolt 3 na njikọ USB Type C na HDMI nkwụnye iji nweta ndakọrịta HDMI. Na-ebi ndụ ihe nkwụnye!
Ọkọlọtọ USB ọdụ dochie Thunderbolt 3. Ọ bụrụ na ị nwere USB ngwaọrụ ị ka nwere ike jikọọ ha na MacBook Pro, ị maara site na gịnị? N'ezie, USB-C ọzọ dị ebube na USB-A nkwụnye. Na ụlọ ọrụ China nke ndị na-agbanwe agbanwe ọ na-ebi ezigbo ezigbo obi ụtọ. Ma chere, a ka nwere ihe ndị ọzọ.
Oghere SD kaadị
Mgbe ị nyere ndị nkwụnye ndị gara aga iwu, echefula ihe ọzọ, onye na-agụ SD kaadị na njikọ USB-C. Na mberede, a n'akpa uwe na-ebu ma nkwụnye. Na tupu ị juo m onye jiri nke a, aga m agwa gị: ndị na-ese foto, dịka ọmụmaatụ.
Plastic mgbabere uzo
O doro anya na nke a bụ mmelite n'ihi na ejirila mpempe akwụkwọ rọba dochie ya na agba MacBook. Nke ka mma, eee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Ihe 8 Apple kwadoro na 2016 MacBook Pro
Ana m ahụ ya ka ọ na-abịa: onye ọ bụla zụrụ otu n'ime Mac Pro ndị a ga-enye onye ọ bụla gbanwere ya otu site na 2014 !!!
Patxi onyekwere dijo
Mmeputa ihe dijitalụ dijitalụ, ngwa anya, adịghị ebe ahụ!
Zaghachi Patxi Villegas
Zaghachi ka eskkilo
M ibu ibu obi uto na m MacBook Pro retina 15 ″ si 2015!